ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို ထင်ဟပ်အောင် ဘယ်လိုဝတ်စားကြမလဲ ? - For her Myanmar
ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို ထင်ဟပ်အောင် ဘယ်လိုဝတ်စားကြမလဲ ?
အမြဲတမ်းလိုက်ဖက်ညီတဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖို့
ယောင်းတို့ရေ … အဝတ်အစားဝတ်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း ဖက်ရှင်ကျနေရုံတစ်ခုတည်းနဲ့ မပြီးသေးဘဲ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် body shape ပေါ်မူတည်ပြီး ဝတ်တတ်စားတတ်ဦးမှ ကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့ ဆိုကြတယ်မလား… အဲ့တော့ ဒီနေ့ Stella က ယောင်းတို့ကို body shape အလိုက် ဘယ်လိုဝတ်စားရင် ပိုလှမလဲဆိုတဲ့ tips လေးတွေ ဝေမျှပေးသွားမယ်နော်။
(၁) ပန်းသီးပုံ အချိုးအစား
ပန်းသီးပုံ အချိုးအစားဆိုတာကတော့ အပေါ်ပိုင်းက အောက်ပိုင်းနဲ့ယှဉ်ရင် ပိုကြီးနေတဲ့ အချိုးအစားပါ။ ဒီအချိုးအစားပိုင်ရှင်တွေက များသောအားဖြင့် ပုခုံးကျယ်ကျယ်၊ ရင်ကြီးကြီးရှိကြပါတယ်။ ယောင်းနဲ့အလိုက်ဆုံး အဝတ်အစားတွေကတော့ လည်ပင်းအဟိုက်အင်္ကျီတွေ၊ အောက်ကားကားစကတ်တွေ၊ ခေါင်းလောင်းဘောင်းဘီတွေနဲ့ အဆင်ဒီဇိုင်းရှုပ်ရှုပ်အပ်ါထပ်တွေပါ။
(၂) သဲနာရီပုံ အချိုးအစား
နောက်တစ်မျိုးပြောရရင် ဂစ်တာရှိတ်ပေါ့။ ဒီအချိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ယောင်းတွေကတော့ လူအများက ကိုယ်လုံးလှတယ်လို့ ချီးကျူးခံရတာများပါတယ်။ ယောင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ အဝတ်အစားမျိုးကတော့ ကိုယ်ကျပ်ဂါဝန်တွေ၊ “V” ပုံသဏ္ဍာန်လည်ပင်းတွေ၊ အသည်းပုံလည်ပင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
(၃) သစ်တော်သီးပုံ အချိုးအစား
ဒါကတော့ နံပတ် (၁) နဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် အပေါ်ပိုင်းသေးပြီး အောက်ပိုင်းကြီးတဲ့ ပုံစံပါ။ ရင်သေးပြီး တင်ကြီးပေါင်တုတ်တဲ့ ပုံစံတွေက ဒီခေတ်မှာ အရမ်းခေတ်စားနေတာဆိုတာ ယောင်းသိရဲ့လား? ဒီအချိုးအစားနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးဆိုရင်တော့ “A” ပုံစံစကတ်တွေ၊ skinny jeans နဲ့ အပေါ်အင်္ကျီပွပွတွေပါပဲ။
(၄) ထောင့်ကျကျ အချိုးအစား
ရင်ကနေတင်အထိ တစ်ပြေးတည်းဖြစ်ပြီး ခါးတုတ်သလိုဖြစ်နေတဲ့ အချိုးအစားပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ ရွေးချယ်သင့်တာကတော့ အတွန့်အဖတ်များများပါတဲ့ အင်္ကျီတွေ၊ လက်ပြတ်နဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းတွေနဲ့ လောင်းကုတ်အရှည်တွေပါ။
(၅) တြိဂံပြောင်းပြန်ပုံ အချိုးအစား
အားကစားလိုက်စားသူတွေမှာ အတွေ့များတဲ့အချိုးအစားပါ။ ပုခုံးကျယ်ကျယ်နဲ့ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ရှိတဲ့ ဒီလိုအချိုးအစားပိုင်ရှင်တွေကတော့ pencil စကတ်တွေ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီအကျပ်တွေနဲ့ အပေါ်ပိုင်းကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အင်္ကျီမျိုးတွေကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
Related article >>> အသက် (၄၀) ဝန်းကျင်မမတွေ ဖက်ရှင်ကျကျလန်းနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း (၅) သွယ်
ကဲ … ဒါကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လိုဝတ်ဆင်သင့်သလဲဆိုတာကို Stella သိသလောက်လေး ဝေမျှပေးထားတာမို့ ယောင်းတို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ယောင်းတို့အားလုံး အမြဲတမ်းယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ လှနေနိုင်ပါစေနော်…
အမွဲတမျးလိုကျဖကျညီတဲ့ ဖကျရှငျတှနေဲ့ ယုံကွညျမှုရှိနစေဖေို့
ယောငျးတို့ရေ … အဝတျအစားဝတျတယျဆိုတဲ့ နရောမှာလညျး ဖကျရှငျကနြရေုံတဈခုတညျးနဲ့ မပွီးသေးဘဲ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျ body shape ပျေါမူတညျပွီး ဝတျတတျစားတတျဦးမှ ကွညျ့လို့ကောငျးတယျလို့ ဆိုကွတယျမလား… အဲ့တော့ ဒီနေ့ Stella က ယောငျးတို့ကို body shape အလိုကျ ဘယျလိုဝတျစားရငျ ပိုလှမလဲဆိုတဲ့ tips လေးတှေ ဝမြှေပေးသှားမယျနျော။
(၁) ပနျးသီးပုံ အခြိုးအစား
ပနျးသီးပုံ အခြိုးအစားဆိုတာကတော့ အပျေါပိုငျးက အောကျပိုငျးနဲ့ယှဉျရငျ ပိုကွီးနတေဲ့ အခြိုးအစားပါ။ ဒီအခြိုးအစားပိုငျရှငျတှကေ မြားသောအားဖွငျ့ ပုခုံးကယျြကယျြ၊ ရငျကွီးကွီးရှိကွပါတယျ။ ယောငျးနဲ့အလိုကျဆုံး အဝတျအစားတှကေတော့ လညျပငျးအဟိုကျအင်ျကြီတှေ၊ အောကျကားကားစကတျတှေ၊ ခေါငျးလောငျးဘောငျးဘီတှနေဲ့ အဆငျဒီဇိုငျးရှုပျရှုပျအပျါထပျတှပေါ။
(၂) သဲနာရီပုံ အခြိုးအစား
နောကျတဈမြိုးပွောရရငျ ဂဈတာရှိတျပေါ့။ ဒီအခြိုးအစားကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ယောငျးတှကေတော့ လူအမြားက ကိုယျလုံးလှတယျလို့ ခြီးကြူးခံရတာမြားပါတယျ။ ယောငျးနဲ့လိုကျဖကျတဲ့ အဝတျအစားမြိုးကတော့ ကိုယျကပျြဂါဝနျတှေ၊ “V” ပုံသဏ်ဍာနျလညျပငျးတှေ၊ အသညျးပုံလညျပငျးတှဖွေဈပါတယျ။
(၃) သဈတျောသီးပုံ အခြိုးအစား
ဒါကတော့ နံပတျ (၁) နဲ့ ဆနျ့ကငျြဖကျ အပျေါပိုငျးသေးပွီး အောကျပိုငျးကွီးတဲ့ ပုံစံပါ။ ရငျသေးပွီး တငျကွီးပေါငျတုတျတဲ့ ပုံစံတှကေ ဒီခတျေမှာ အရမျးခတျေစားနတောဆိုတာ ယောငျးသိရဲ့လား? ဒီအခြိုးအစားနဲ့ အလိုကျဖကျဆုံးဆိုရငျတော့ “A” ပုံစံစကတျတှေ၊ skinny jeans နဲ့ အပျေါအင်ျကြီပှပှတှပေါပဲ။
(၄) ထောငျ့ကကြ အခြိုးအစား
ရငျကနတေငျအထိ တဈပွေးတညျးဖွဈပွီး ခါးတုတျသလိုဖွဈနတေဲ့ အခြိုးအစားပိုငျရှငျတှအေနနေဲ့ ရှေးခယျြသငျ့တာကတော့ အတှနျ့အဖတျမြားမြားပါတဲ့ အင်ျကြီတှေ၊ လကျပွတျနဲ့ ကွိုးတဈခြောငျးတှနေဲ့ လောငျးကုတျအရှညျတှပေါ။
(၅) တွိဂံပွောငျးပွနျပုံ အခြိုးအစား
အားကစားလိုကျစားသူတှမှော အတှမြေ့ားတဲ့အခြိုးအစားပါ။ ပုခုံးကယျြကယျြနဲ့ ကဈြကဈြလဈြလဈြရှိတဲ့ ဒီလိုအခြိုးအစားပိုငျရှငျတှကေတော့ pencil စကတျတှေ၊ ဂငျြးဘောငျးဘီအကပျြတှနေဲ့ အပျေါပိုငျးကိုတော့ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး အင်ျကြီမြိုးတှကေို ရှေးခယျြဝတျဆငျသငျ့ပါတယျ။
Related article >>> အသကျ (၄၀) ဝနျးကငျြမမတှေ ဖကျရှငျကကြလြနျးနိုငျဖို့ နညျးလမျး (၅) သှယျ
ကဲ … ဒါကတော့ ကိုယျ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားပျေါမူတညျပွီး ဘယျလိုဝတျဆငျသငျ့သလဲဆိုတာကို Stella သိသလောကျလေး ဝမြှေပေးထားတာမို့ ယောငျးတို့အတှကျ အထောကျအကူဖွဈစမေယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ယောငျးတို့အားလုံး အမွဲတမျးယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ လှနနေိုငျပါစနေျော…
Tags: body shape, Fashion, fashionista, outifts, Style, styling, tips, what to wear